Booliska oo lagu eedeeyay qaabkii ay uga jawaabeen weerarkii masaajidka Bærum. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Booliska oo lagu eedeeyay qaabkii ay uga jawaabeen weerarkii masaajidka Bærum.
Booliska magaalada Bærum ayaa lagu eedeeyay qaabkii ay uga jawaab celiyeen weerarkii argagaxiso ee lagu qaaday masaajidka Al Noor ee Bærum. Inkasta oo weerarkaas aan qofna lagu dilin, hadana booliska ayaa lagu eedeeyay inay aad uga soo daaheen goobtii uu falka ka dhacay, iyaga oo la sheegay in boolisku ay garan waayeen cinwaanka uu masaajidka ku yaalo, iyaga oo adeegsanayo aalada google Maps.
Warbixinta laga diyaariyay jawaab celinta Booliska ee weerarkaas, ayaa lagu sheegay in boolisku ay mudo ku qaadatay inay fahmaan halista weerarka masaajidka lagu qaaday, taasna ay sabab u noqon karto is fahan waa dhanka luuqada ah, ama inaysan boolisku markii hore fahmin farinta masaajidka uga timid.
Irfan Mushtaq oo katirsanaa maamulka masaajidka Alnoor, ahaana qofkii booliska la xiriiray ee gudbiyay ee fariinta weerarka argagaxiso, ayaa sheegay in luuqadiisu ay aheyd mid fasiix ah oo la fahmi karo. Wuxuuna booliska ku eedeeyay inaysan si dhab ah u qaadan halista fariinta ilaa uu dhowr mar ugu cel-celiyay.
Beate Gangås oo ah madaxa booliska ayaa qiray inay aheyd in boolisku uu falcelis tan ka fiican ka sameeyo weerarkaas, ama ay aheyd in goobta uu weerarka ka dhacay si dhaqso ah ku imaadaan.
Maxkamada Oslo ayaa ninkii weerarka masaajidka ku qaaday isbuucii hore ku xukuntay 21 sano oo xabsi ah joogteyn ah.
Halkan ka akhri warbixinta oo dhameystiran.
Previous articleXaasaska Thailandiiska ah waa la ogolaadaa, laakiin nimanka Nigerian-ka ah waa la diidaa.
Next articleXisbiga Frp oo dhexdiisa madaxa iskula jiro.